3.3 Isla’egyada jibbaarada
Halkaan waxaa ku qoran dhowr tusaale oo la xiriira isla’egyada jibbaarada:
x2 = 3 x3 = 1000 x4 = 625
Sababta magacaan loo siiyey waa maaddaama tirada aan la garanayn (tusaalahan x) ay tahay salka jibbaarka.
Waxaad qeybtii hore ee joometeriga ku soo aragtay, sida xididka labajibbaaranaha loogu isticmaali karo xallinta qeybta koowaad ee tusaalaha kore, isle’egta heerka labaad.
Sidaan filayo inaad xusuusato, waxaa isla’egta loo xallin karaa sida soo socota:
Xididka labajibbaaran, waxaa loo isticmaalaa in lagu raadiyo tirada marka iyada la iskudhufto noqonaysa 3. U fiirso in isle’egta heerka labaad ee noocaan ah ay yeelan karto, laba xal mid togan iyo mid taban (maaddaama laba dhufsane oo tabani ay soo saaraan taran togan).
x ≈ ±1,73
Tiroxisaabiyaha waxaa la isticmaalaa badhankan .
Si la mid ah sida aynu isla’egta heerka labaad x2 = 3 ugu xallinay xididka labajibbaaran ayeynu isla’egta heerka x3 = 1000 ugu xallin karnaa innagoo adeegsanayna xididka saddex jibbaaran . ”Xididka saddex jibbaaran” waxaa kaloo loo yaqaan ”xididka saddexaad”.
Isla sababtaa ayaa isla’egta heerka afaraad x4 = 625 lagu xallin karaa ”xididka afraad” .
Si loo helo xididka saddexaad, xididka afaraad, xididka shanaad iwm, waxaa jira badhan gaar ah oo uu leeyahay tiro xisaabiyahaagu. Muqaalka badhanku, wuxuu ku xiran yahay hadba nooca makiinadda xisaabta ee aad haysato. Halkaan waxaa ka muuqda dhowr nooc oo kala duwa:
Qaanuun ahaan, waxaa marka hore la garaacaa ”darajada” xididka ka dibna badhanka, ugu danbayntana tirada la raadinayo xididkeeeda.
x3 = 1000
Ma yeelan karto xal taban maaddaama jibbaarku yahay kisi.
x4 = 625
Jibbaar dhaban ah macnahiisu waa inay jiraan xal taban iyo mid togan.
Si kale oo loo qori karo waa . Sidoo kale ayaa loo qori karaa .
Ma jirtaa isla’eg jibbaaran oo leh jibbaar dhaban ah oo aan lahayn laba xal?
Sheeg tusaale haddii ay jirto.
Sidee baad ugu qori kartaa makiinaddaada xisaabta?